भारीका भरमा दार्चुलाका महिला – इन्सेक
भारीका भरमा दार्चुलाका महिला
दार्चुला ०७५ वैशाख १५ गते
अपि हिमाल गाउँपालिका-५ का अधिकांश महिला भारी बोकेरै घर चलाउने गर्छन् । जीविकोपार्जन गर्ने वैकल्पिक पेसाको अभावमा उनीहरू भारी बोकेरै भए पनि आफ्नो गुजारा गर्न बाध्य भएका हुन् ।
मार्मा गाउँपालिकाको पारिबगरदेखि अपिहिमाल गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २, ३, र ४ सम्म भारी पुर्‍याएबापतको कमाइले महिलाहरूले घर खर्चदेखि छोराछोरीको पढाइलगायत अन्य खर्च धान्दै आएका छन् ।
पिठ्युँमा भारी बोकी जीविकोपार्जन गर्ने अपिहिमाल गाउँपालिका-५ की रेनुका धामीले भारी बोकेरै घर खर्च चलाइरहेको बताइन् । यहाँका अधिकांश महिला/पुरूषले हरेक दिन भारी बोकेर मासिक ३५ हजारभन्दा बढी बचत हुने बताइन् । उनले भनिन्-'घरमा चार छोरा र दुई छोरी छन् । सबै खर्च भारी बोकेरै जोहो गर्दै आइरहेकी छु ।'
उनी मात्र होइनन् उनीसँगै भारी बोक्ने अन्य महिलाको पीडा उस्तै छ । दैनिक प्रतिकिलो ३५ देखि ५० रुपियाँका दरले व्यापारीले सामान बोकाउने गरेपछि २ हजारदेखि २ हजार ५ सय रुपियाँसम्म कमाउने गरेका छन् । सरीया, पाइप, जस्तापाता जस्ता अप्ठ्यारो भारी उनले दैनिक रूपमा पिठ्यूँमा बोकेरै लिने गरेका छन् । कहिलेकाही दुधे बालकलाई छाडेरसमेत भारी बोक्नुपर्ने उनको बाध्यता छ । भारी नबोके परिवार चलाउन नसकिने भएपछि उनी जोखिम मोलेरै भारी बोक्ने गरेकी हुन् ।
अर्की भरिया जानकी ठगुन्नाले आफूले पनि वर्षौँदेखि भारी बोक्दै आएको बताइन् । 'भारी बोक्ने काम नपाएको दिन घरायसी कामकाज गर्छौँ ।'-उनले भनिन् । अपि हिमालसम्म खच्चडमार्फत अन्य सामग्री ढुवानी हुने गरेको भएपनि पाइप, जस्ता पाताहरू लिन अहिले पनि भरियाकै प्रयोग छ ।
'भारी नबोके परिवार कसरी पाल्नु ?'-गम्फा ठगुन्नाले भनिन्-'भारी बोकेको पैसाले छोराछोरी पढाउन र घर खर्च चलाउनुपर्छ । खेतमा लगाएको अन्न बाली वर्षभरी खान पुग्दैन । गाउँमा अन्य काम छैन ।'
'साघुँरो बाटोमा पाइपहरू दायाँबायाँ हुने बित्तिकै ज्यानको जोखिम छ । तरपनि भारी बोक्नुको विकल्प छैन ।'-स्थानीय गोविन्द ठगुन्ना भन्छन्-'भारी नबोके परिवार कसरी पाल्नु?'
अहिले अपि हिमालमा भारी बोक्नेमा अधिकांश वडा नम्बर ५ लुम्थी र सौगन्नाका महिला/पुरुष छन् । घरका बुढाबुढी (पतिपत्नी) नै भारी बोक्ने काम गर्छन् । खण्डेश्वरी र घुसासम्म सामान ढुवानी गरेरै जिविका चलिरहेको स्थानीय सुना धामीले बताइन् ।
जीविकोपार्जन गर्ने वैकल्पिक पेसाको अभावमा उनीहरू भारी बोक्न बाध्य भएका हुन् । 'दशौँ वर्षभयो भारी बोकेरै जिविका चलाएका छौँ ।'-धामीले भनिन् ।